Kwatakange tisingakundike: pakati penyaya yematsotsi uye zvakajairika | Zvazvino Zvinyorwa
Kwataive tisingakundike ibhuku rematsotsi nemunyori wechiSpanish María Oruña. Chinyorwa chayo chekutanga chakaburitswa muna Kubvumbi 2018 uye chikamu chechitatu cheiyo Cantabrian dzakateedzana Mabhuku ePuerto Escondido. Kufanana nezvitsauko zvakapfuura, iyo nyaya inosanganisira iwo iwo mamiriro uye ma protagonists - vamiririri Valentina naOliver -, kunyangwe ichiratidza chimiro cheumwe neumwe, nekumwe kusarudzika.
Kumwe kwekusiyana kukuru kwebhuku iri zvine chekuita nevakafanotangira ndiko kusanganisirwa kwenyaya yechinyakare. Zvayo, Oruña akaita ongororo yakawandisa, nehurukuro nehunyanzvi uye nemagwaro akawandisa. Iyo nyaya, ipapoka, inopinda mune isinganzwisisike mweya yemweya, iyo isina kana sainzi ine tsananguro chaiyo. Iyi paradigm switch inoita kuti muverengi afungisise pakati pezvazviri uye zvisiri.
1 Pfupiso yeKwaive Kwatisingakundike
1.1 Kutsva kutsva
1.2 Kutanga data
1.3 Mugari wenhaka kubvunzurudzwa
1.4 Zviitiko zvakajairika
2 Kuongorora Kwatakanga Tisingakundike
2.4.1 Nzira yekunyora
2.4.2 Kuisa mimhanzi
2.4.3 Zita remunhu mukuru
3 Nezve munyori, María Oruña
Pfupiso ye Kwataive tisingakundike
Valentina anoonekana nemukomana wake Oliver, anopinda mumota ndokugadzirira kusiya kabhini kake kuenda kuSantander. Ikoko, iye refutenendi nzvimbo yekutsvagisa yeUOPJ inotungamirwa. Pakarepo, inogamuchira kufona kubva kuna Captain Marcos Caruso, uyo anomuudza kuti anofanirwa kuenda kuSuances, kunyanya kuImba yeQuinta del Amo, sezvo murimi webindu -Leo Diaz- akaonekwa akafa munzvimbo dzakasvibira dzenzvimbo.
Mumba mune coroner Clara Múgica, uyo - mushure mekuongorora mutumbi waLeo wekare-- achifungidzira kuti akafa nechirwere chemwoyo. Valentina anosvika panzvimbo iyi uye anobva angoziviswa nehunyanzvi nezve zverufu. Ichi chichaita inosimbisa kuti akashaya nenguva dzegumi neimwe husiku, uye izvo, mukuwedzera, mumwe munhu akavhara maziso avo. Iyi yekupedzisira tsananguro inosiya mumiriri akashamisika.
Mugari wenhaka kubvunzurudzwa
Lieutenant anotanga kuongorora zvese zvakatenderedza mushakabvu, izvo zvinomutendera kuyemura kuti yakakura sei uye yakanaka imba yacho. Ari kure iye anofungidzira jaya, ndezve Charles Green, waunofanira kubvunzurudzakubvira ndiye akawana mutumbi. Iye murume munyori uye muridzi wepfuma, aripo kuitira kupedza zhizha, kupedzisa chinyorwa chebhuku rake idzva uye kutengesa imba.
Green inoratidza kuna Valentina neshamwari dzake —Riveiro naSabadelle— kuti chimwe chinhu chinoshamisa chinoitika muchishanu. Kubva zvaakasvika, akaona ruzha rusinganzwisisike, husinga tsanangurike uye akatomuka nemavanga pamuviri wake pasina chikonzero. Kunyangwe achikahadzika, lieutenant anofanirwa kubvunza nezvezviitiko zvakajairika uye nemabatiro avanoita rufu rwemugadheni.
Iyi ndiyo nzira iyo nyaya inoitika iyo inopindirana nekufamba kwaGreen kune zvakapfuura - uyo anorangarira hudiki hwake uye zhizha muSuances--, nezvakavanzika zvakaiswa muQuinta del Amo. Zvese apo kuferefetwa kwekufa kwaDíaz uye zviitiko zvechipoko zviri kuitwa. Vokupedzisira vachazobvunzana naPurofesa Machín, uyo anopa kosi pazvinhu zvakajairika nezvinoitika.
Analysis of Kwataive tisingakundike
Kwataive tisingakundike Iyo yakaiswa munzvimbo yemahombekombe eSuances, Spain. Bhuku rine Mapeji 414 akagoverwa pakati pezvitsauko gumi neshanu, umo marongedzero matatu akaverengerwa pasi pemhando mbiri dzerondedzero. Pane anoziva zvese wechitatu munhu munyori iyo inotsanangura zvinoitika zvevatambi, uye mumwe mumunhu wekutanga iyo inotaurira kunyorwa kweruzivo naCarlos Green.
Kufanana nekutangisa kwekutanga, Oruña anotangazve iyi nyaya muCantabria, chaizvo muMuzinda waMambo mukuru. Munyori anorondedzera nzvimbo iyi nenzira yakasarudzika, pamwe nedzimwe nzvimbo muSuances. Basa rakazara rekutsvagisa reSpanish, uyo ane tsananguro dzakatsetseka anokwanisa kuendesa muverengi kune aya makuru marongero.
Iye munyori wechidiki weAmerica. Iye anogara muCalifornia uye anoenda kuSuances kunonyora yake nyowani nyowani. Ambuya vake Marita - avo vakafa gore rapfuura - vakamusiya iye ega mugari wenhaka kuMuzinda unonzi "Quinta del Amo". Carlos anoyeuka nzvimbo iyi nechishuwo chikuru, sezvo akapedza nguva zhinji yezororo rake ipapo uye aine ruzivo rwake rwekutanga pamusoro pekusevha.
Ndiyo protagonist yenyaya dzakateedzana, lieutenant anobva kuSpanish Civil Guard anotungamira iyo Organic Unit yeMatare eVatongi (UOPJ). Mwedzi mitanhatu yapfuura akatamira kuVilla Marina, muSuances, aine mukomana wake Oliver. Kubva ipapo hupenyu hwake hwave hwakadzikama uye hwakagadzikana.
Iye ane ruzivo purofesa wekuziva kwepfungwa, ari mudhorobha kuzopa hurukuro pazvinhu zvakajairika. Idzi hurukuro dzinoitirwa mumitambo yemitambo yePalacio de La Magdalena, maanonyanya kugovana nemudzidzi nyanzvi pachinhu ichi.
Nekuda kwekubudirira kweiyo sarja Mabhuku ePuerto Escondido - sezvo izvi zvakachengeta maSuances sedanho rega-, iyo Kanzuru yeKanzuru yakagadzira mu2016 iyo Puerto Escondido Literary Nzira. Ikoko, vashanyi vanogona kufamba kuburikidza nenzvimbo dzese dzakapihwa mumanovel.
Iye munyori weSpanish anorondedzera nhoroondo dzake pamwe nekubatanidzwa kwemimhanzi mukusimudzira kwenyaya. Pachikamu ichi akabatanidza madingindira matanhatu emimhanzi, runyorwa runogona kunakidzwa pachikuva Spotify, ine zita racho: Mumhanzi -Pataive Tisingakundike- Spotify.
Zita remunhu mukuru
Oruña akazivisa mubvunzurudzo naMontse García kune portal Izwi raGaliciaque zita remutambi mukuru wenyaya iyi, Valentina Redondo, chiratidzo kune munyori Dolores Redondo. Panyaya iyi, akataura: "zvaive zvemunhu, nekuti kwandiri, semunyori, zvinomiririra kuti" usamborega kurota, "nekuti akandikurudzira kuti ndirambe ndichishanda ndisina kumbofunga kutsikisa."
Nezve munyori, María Oruña
Munyori weGalician Maria Oruña Reinoso Akazvarwa muVigo (Spain) muna 1976. Akadzidza zvemutemo kuyunivhesiti, basa raakashanda kwemakore gumi mubasa rezvevashandi nekutengeserana. Mushure menguva iyoyo akazvipira chose chose kumabhuku. Muna 2013, akaburitsa Ruoko rwemuseve, rake rekutanga basa, inoverengeka ine dingindira revashandi, zvinoenderana neruzivo rwake rweugweta.
Makore maviri gare gare akapa rake rechipiri basa rekunyora, kutanga mune yehuipi nhoroondo yemhando: Chakavanzika chiteshi (2015). Naiye akatanga hurukuro yake inozivikanwa Mabhuku ePuerto Escondido, iyo ine Cantabria sedanho rayo guru. Nzvimbo ino yakakosha kwazvo kumunyori, sezvo achinyatsoiziva kubva achiri mudiki; haana kuzvitsanangura pasina muzvinyorwa zvake.
Kutenda kubudirira kwechikamu chekutanga ichi, makore akati gare gare iye akatumira: Nzvimbo yekuenda (2017), zvakare nekugamuchirwa kukuru nevaverengi. Parizvino akateedzana ane mamwe maviri enoverengeka: Kwataive tisingakundike (2018) uye Zvinovanzwa nemafungu (2021). Pakati penyaya mbiri idzi, veSpanish vakaratidza: Sango remhepo ina (2020).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Kwataive tisingakundike